शेयर बजारमा उतारचढाव, ११८६ विन्दुमा परिसूचक | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण शेयर बजारमा उतारचढाव, ११८६ विन्दुमा परिसूचक
on: ३० पुष २०७५, सोमबार १७:४४ नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
शेयर बजारमा उतारचढाव, ११८६ विन्दुमा परिसूचक
पुस ३०, काठमाडौं (अस) । सोमवार शेयर बजारमा १ प्रतिशतले बढेको छ । पहिलो कारोबारदेखि उतारचढावमा रहेको बजार ११ दशमलव ७४ अंक बढेर १ हजार १ सय ८६ दशमलव ८० विन्दुमा पुगेको हो । कारोबार रकममा २८ दशमलव १० प्रतिशतले घटेर रू. २६ करोड ८१ लाखमा सीमित रहेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत बढेर २ सय ५० दशमलव ४९ विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्युट्रन जोन अर्थात् ५४ दशमलव १० स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
नेप्सेमा सर्वाधिक कारोबार भएका १० कम्पनीहरु
९ समूहको परिसूचक
यस दिन नौं समूहको कारोबार भएको छ । जसमध्ये बैंकिङ समूह बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र बजार उकालो लागेको हो । यस दिन नेप्सेले दिएको तथ्यांकमा जलविद्युत समूहको परिसूचक १४ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । प्राविधिक समस्याका कारण यस समूहको परिसूचकमा गडवडि भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ ।
१५८ कम्पनीको कारोबार
यस दिन कारोबार भएका १ सय ५८ कम्पनीको कारोबार भएको छ । नेपाल बैंकको रू. ४ करोड ७२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस वाणिज्य बैंकको शेयर प्रतिकित्ता रू. २ सय ९७ पुगेको छ । सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको शेयर मूल्य ९ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय १२ मा पुगेको छ । साथै, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७२ प्रतिशत र सिटि एक्स्प्रेस फाइनान्सको ९ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेको हो । त्यसैगरी, बैंक अफ काठमाडौंको शेयर मूल्य ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. २ सय ७४ मा कारोबार भएको छ ।
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार १६:२७
तेस्रो घण्टामा पाँच समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से ०.७६ अंकले बढ्यो
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:०४
सात समूहको परिसूचक घटेसँगै ०.९४ अंकले घट्यो नेप्से
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार १३:०४
नेप्से स्थिर ०.०७ अंकले घट्यो (१२ बजेको अपडेट)
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार १२:०७